Booliska Mareykanka ee magaalada ay Soomaalida ku badan yihiin oo "la kala dirayo" - Tilmaan Media
Booliska Mareykanka ee magaalada ay Soomaalida ku badan yihiin oo “la kala dirayo”
Golaha deegaanka magaalada Minneapolis oo ah magaalo ay aad u deggan yihiin dadyowga jaaliyadda Soomaalida ee dalkaasi Mareykanka ayaa ballan qaaday in uu kala dirayo waaxda booliska magaaladasi, arrintaa oo noqoneysa tallaabo loo qaaday dhanka wanaagsan, xilli dalkaasi oo dhan ay ka socdaan dibadbaxyo ka dhashay dilkii bishii la soo dhaafay magaaladaasi loogu geystay George Floyd oo ahaa nin madow ah.
Sagaal ka mid ah xildhibaannada golaha deegaanka Minneapolis ayaa sheegay in la dhisayo nidaam cusub oo ka shaqeeya badqabka shacabka.
Booliska magaaladaasi ayaa in badan lagu eedeeyay cunsuriyad iyo midab-takoor.
Duqa magaaladaasi, Jacob Frey, ayaa mar sii horreysay ku gacan seyray in la kala diro waaxda booliska ee magaaladaasi, hadalkaa oo sababay in dadka dibadbaxyada dhigayay ay ku oriyaan.
Dibadbaxyo looga soo horjeedo cunsuriyadda ayaa lagu qabtay qeybo badan oo Mareykanka ah ka dib geeridii George Floyd ee ku dhintay gacanta booliska.
Haseyeeshee waxaa la debciyay tallaabooyinka amniga lagu sugayay ee guud ahaan waddankaasi muddadii ay socdeen dibadbaxyadani, maadama aysan jirin rabshadihii dhacayay maalmo dhaweyd.
Aaska Floyd ayaa la qorsheeyay Talaadada berry ah in lagu qabto Houston, oo ah magaaladii uu ku soo koray ka hor inta uusan u guurin dhanka magaalada Minneapolis.
Mudaaharaadyadan ayaa billowday ka dib markii baraha bulshada lagu faafiyay muuqaalka qaabka uu u dhintay ninkan Ameerikaanka madowga ahi, iyadoo la arkayay askari boolis caddaan ah oo jilibka qoorta kaga haya ilaa uu ka naf-baxay.
Askarigaasi oo lagu magacaabo, Derek Chauvin, ayaa shaqada laga eryay, waxaana lagu soo oogay dacwad dil ah. Seddex askari oo kale oo goobta joogay ayaa sidoo kale iyagana shaqada laga eryay, waxaana lagu eedeeyay inay gacan ka geysteen dilkiisa.
Minneapolis waxaa deggan Soomaali aad u badan, waxaana booliska magaaladaasi in badan lagu eedeeyay faquuq iyo mibad-takoor lagu beegsanayo dadka laga tirada badan yahay ee sida jaaliyadda Mareykanka madowga ahi.
Maxaa kasoo baxay kulankii madasha xisbiyada qaran iyo gudoonka baarlamanka
Turkiga iyo diyaaradaha dagaalka ee bilaa duuliyaha ah (Drones)